Spotify - Music and Podcasts 8.5.9.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.5.9.0 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ Spotify - Music and Podcasts
Spotify - Music and Podcasts ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Spotify ယခုမိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သွားလေရာရာ၌, ဖြောင့်ဂီတနှင့် podcasts တွေကိုနားထောင်ပါ။
Spotify နှင့်အတူသငျသညျဂီတနှင့် podcasts တွေကို၏လောကဓာတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ သငျသညျအနုပညာရှင်နှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုနားထောင်, ဒါမှမဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကို၏သင့်ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အသစ်ကဂီတရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုပါသလား? သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုက်ညီသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များရမယ့်အဆင်သင့်လုပ်သီချင်းစာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
Spotify သင်တို့ကိုလည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုမတှေ့နိုငျသောမူရင်းအပါအဝင် Podcasts ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, ပေးထားပါတယ်။
•ရောသမမွှေ mode ကိုပေါ်မဆိုအနုပညာရှင်, album သို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်း Play
Spotify ပရီမီယံ features တွေ
•မည်သည့်သီချင်းမဆိုစက်ပေါ်ရှိမည်သည့်အချိန် Play - မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်, သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာ
•အော့ဖ်လိုင်းနားထောငျအတှကျဂီတ download လုပ်ပါ။
•အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာတွေ - ပဲမပြတ်မတောက်ဂီတ။
•အဘယ်သူမျှမကတိကဝတ် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအချိန်ကိုပယ်ဖျက်။
Spotify - Music and Podcasts အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Spotify - Music and Podcasts အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Spotify - Music and Podcasts အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Spotify - Music and Podcasts အား အခ်က္ျပပါ
sf49ers စတိုး 37.65k 12.36M
Spotify - Music and Podcasts ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Spotify - Music and Podcasts အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.5.9.0
Release date: 2019-05-24 09:03:02
Spotify - Music and Podcasts APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ